အရင်ခေတ်က ထူးခြားဆန်းကြယ်သော လူထူးလူဆန်းများ – MMPost
1 မုတ်ဆိတ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးလို့ သိကြတဲ့ Annie Jones ကတော့ ပီ. တီ ဘာနမ်နဲ့ လှည့်လည်သွားလာခဲ့ပြီးတော့ နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း မုတ်ဆိတ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးတော့ ဘာနမ်ရဲ့ ထူးခြားဆန်းကျယ်ကွန်ဂရက်တွေရဲ့ ပြောဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်လာပါတယ်။
2 ၁၈၁၁ခုနှစ် ထိုင်းမှာမွေးခဲ့တဲ့ Chang နဲ့ Eng Bunker တို့ဟာလည်း သုံးနှစ်လောက် လှည့်လည်ပြသခဲ့ပြီးတော့ ကယ်လ်ဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းမှာ အခြေတကျနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ဟာ ညီအစ်မနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီးတော့ ကလေး ၂၁ယောက်ရဲ့အဖေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
3 အိုဟိုင်းရိုးရဲ့ ခြေထောက်ကြီးကြီးနဲ့ ကောင်မလေးလို့ လူသိများကြတဲ့ Fannie Mills ကတော့ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါခံစားနေရသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
4 အရေပြားပုံမမှန်တဲ့လက္ခဏာကြောင့် Felix Wehrle ရဲ့အရေပြားကို ဆွဲဆန့်နိုင်စေခဲ့ပြီး Elastic Man လို့တောင် အမည်ပေးခြင်းခံရပါတယ်။
5 သူ့ကိုတော့ ဆင်လူသားလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ Joseph Merrick ဟာ ကြေကွဲဖွယ်ဘ၀မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတာပါ။
သူရဲ့မိဘတွေ နှင်ထုတ်လိုက်လို့ ထူးခြားဆန်းကြယ်ပွဲတွေမှာ လိုက်ပါပြသခဲ့ပါတယ်။
6 Grady Stiles Jr. ကိုတော့ ပုစွန်လုံးကောင်လေးလို့ လူသိများပြီးတော့ အဲဒီနာမည်ကပဲ သူ့ကို စင်ပေါ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ သူဟာအရက်စွဲနေခဲ့ပြီး သူ့သမီးရဲ့ကောင်လေးသတ်လို့ သေခဲ့ရပါတယ်။ (ဒါဆိုရင် မိန်းမရခဲ့သေးတာပေါ့)
7 အရိုးခြောက်လူသားဖြစ်တဲ့ Isaac Sprague ကတော့ အသက် ၁၂နှစ်အရွယ်မှာ ကိုယ်အလေးချိန်တွေ ဆုံးရှုံးသွားခြင်းကြောင့် ဒီနာမည်ရခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာရောဂါကြောင့်လဲဆိုတာတော့ မသိရပါဘူး။
အလေးချိန်ကျခြင်းဟာ အရွယ်ရောက်ပြီးချိန်ကနေ သေဆုံးတဲ့အထိပါပဲ။
8 ရုရှားနိုင်ငံက Fedor Jeftichew ကတော့ ဂျိုဂျို – ခွေးမျက်နှာနဲ့လူ နာမည်နဲ့ လူသိများပါတယ်။ ပီ. တီ. ဘာနမ်ရဲ့ ဆပ်ကပ်ပွဲမှာလည်း စတားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူဟာ Star Wars ရဲ့ Chewbacca ကာရိုက်တာရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု ဖြစ်လာပါတယ်။
9 Frank Lentini ကို ကပ်ပါးအမွှာအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့ပြီးတော့ ခြေထောက်သုံးချောင်းနဲ့ ရှင်သန်ခဲ့ရပါတယ်။
ယူအက်စ်ကနေ အီတလီကို သူ့မိသားစုတွေပြောင်းချိန်မှာ Ringling Brothers ဆပ်ကပ်ကို ၀င်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
10 George နဲ့ Willie Muse တို့ဟာ တထပ်တည်းတူတဲ့ အမွှာတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ အမေရိကတောင်ပိုင်းမှာ မွေးဖွားခဲ့သူတွေပါ။
သူတို့ပြန်ပေးဆွဲခံရတုန်းက သူတို့ရဲ့ဆံပင်တွေရှည်လာခဲ့ခြင်းက ဆပ်ကပ်ပွဲမှာ မားစ်ဂြိုလ်မှလူသားများဆိုပြီးတော့ ထင်ရှားဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။
11 Daisy နဲ့ Violet Hilton တို့ဟာ တင်ပါးချင်းကပ်နေကြပါတယ်။ သူတို့ကို အသက်သုံးနှစ်အရွယ်ကတည်းက ဆပ်ကပ်မှာ ပြသခဲ့ပါတယ်။
12 လူ့ဇီးကွက်လို့နာမည်ရတဲ့ Martin Laurello ကတော့ လည်ပင်းကို ၁၈၀ဒီဂရီလှည့်နိုင်ပါတယ်။ Coney ကျွန်းက Sam Wagner ရဲ့ပွဲတွေမှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။
13 တက္ကဆက်မှခြေလေးချောင်းနဲ့ မိန်းကလေးလို့ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတဲ့ Myrtle Corbin ကိုတော့ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းချက်ကြောင့် အရိုးတွေပုံမှန်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အရိုးတွေနှစ်ခုကွဲပြီး ခြေထောက်လေးတွေလို ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
14 ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မွေးဖွားခြင်းမျိုးတွေကြောင့် သူမရဲ့ဒူးတွေကို နောက်ပြန်ကွေးနိုင်ခဲ့တဲ့ Ella Harper ကိုတော့ ကုလားအုတ်မလေးလို့ သိကြပါတယ်။ သူဟာ တစ်ပတ်ကို ဒေါ်လာ၂၀၀ ရပြီးတော့ စတားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။
15 Mirin Dajo ကတော့ ဆေးပညာလောကမှာ နာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုပစ္စည်းနဲ့ဖောက်ဖောက် ဒဏ်ရာမရခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြသဖို့အတွက် အပ်ကိုမြိုချပြရင်းနဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရှင်းပြတဲ့ အိမ်မြှောင် ဘာ့ကြောင့် စုတ်ထိုး ရသလဲ ဆိုတာ